SHEEKADII KUN HABEEN IYO HABEEN (1001) qeybtii 24aad – Filimside.net
SHEEKADII KUN HABEEN IYO HABEEN (1001) qeybtii 24aad
Sheekada waxay qeybtii hore inoo mareysa markuu waziir jacfar khaliifka ku dhahay hadii aan dhacdo tan ka yaab badan kaaga sheekeeyo adoonkaan madow naftiisa ma ii hibeyneysaa ?
Narkaas ayuu khaliifkii ku jawaabay haa.
Kadib waziir jacfar ayaa hadalkiisa sidaan ku bilaabay. “ waxaad ogaataa khaliifkii Mu’miniintow in waa hore uu magaalo shiinaha ku taalo ku noolaa nin dhar tole ah wuxuuna iska ahaa nin iska shaqeysta iskana furfuran, mararka qaarna asiga iyo xaaskiisa tamashle ayay isku raaci jireen.
Maalin maalmaha kamid ah iyagoo tamashle ka imaaday ayay waxay jidka ku arkeen nin weershe ah oo khamri cabsan kaasoo hadaad aragtid qaabka uu u yaalo aad la qosleysid xitaa qofka xanaaqsan ayaaba wajigiisa haduu arko qosol la dhacaay.
Kadib ayay salaameen xoogaana la sheekeysteen waxayna jeclaadeen in habeenkaas gurigooda ku casuumaan oo iyaga la joogo lana seexdo sidii ayuuna weershihii kaga ogolaaday.
Way isi soo raacen intii ay jidka kusoo jireena waxay horay u soo gateen kalluun si ay habeenkii u cunaan.
Markii ay xaafada tageen ayay kalluunkii cunis ku bilaabeen, iyagoo cunaya ayaa naagtii uu qabay ninkii dhar tolaha ahaa inta soo qabatay cad kalluun weyn ah oo is heysta afka u galisay weershihii iyadoo leh halmar afka wada gasho oo cun maadaama diif badan iyo gaajo ka muuqatay weyna ku dirqisay iyadoon xitaa la sugin intuu ka calaanjinaayo.
Ninkii weershaha ahaa nin wadkiis galay ayuu ahaaye lafihii kalluunka ayaa dhuunta u istaagay kadibna wuu dhintay.
Shahra-zaad markaas waxay ogaatay in la gaaray subaxii weyna joojisay hadalkii u banaanaa.
Habeenkii xigay ayaa waxay tiri: boqorow waxaa isoo gaaray in markii weershaha uu dhintay uu yaabay harqaanlihii asigoo leh “laa xowla walaa quwata ilaa billaah miskiinkaan in gacmaheen uu ku dhinto ayaa u qorneyd hada ninkii miskiinka ahaa waaba dilnee maxaan sameynaa?
Markaas ayay naagtii tiri soo qabo go’aas oo ninka kusoo duub soona xambaarso waan qaadeynaa hadii dadka na weydiiyaana waxaan dhaheynaa wiilkaan xanuunsan ayaan dhakhtar u wadnaa si aan naloo dareemin.
Kadibna sidii ayay yeeleen iyagoo gurigii dhakhtarka imaaday albaabkii ayay garaaceen waxaana ka furtay jaariyad dhakhtarka la joogtay, waxayna ku dhaheen “dhakhtarka hadaad noogu wacdo diinaarkaan ayaan ku siineynaa” waayahay ayay tiri markaas ayay kor fuushay ninkii iyo naagtiina meydkii inta meesha dhigeen ayay kasoo carareen.
Jaariyadii markii ay dhakhtarkii u tagtay kaasoo yahuud ahaa ayaa waxay ku tiri nin iyo naag oo bukaan wado ayaa banaanka taagan waxayna rabaan inaad usoo baxdo ayagoo isiiyeen diinaarkaan.
Markaas ayuu dhakhtarkii soo dagtay hase yeeshee meesha oo mugdi aheyd xiligana habeen ahaa ayuu wuxuu ku dul dhacay meydkii kuna kor kufay asoo waliba sambabka uga istaagay.
Dhakhtarkii ayaa aad iskugu naxay wuxuuna u qaatay in bukaankii uu ku istaagay isla markaasna uu dhintayasigoo leh “yaa caziiz, yaa haaruun wa yuushac binu nuun ninkii miskiinka ahaa waan dilay ee maxaaa talo ah?”
Markaas ayuu go,aansaday in uu ku tuuro guri nin muslim ah oo ay daris ahaayeen, ninkaas muslimka ah ee yahuudka dariska ahaayeen waxaa asna nafta u keenay oo uu qaati ka taagnaa tuug habeenkasta xado, markii uu maqlay jugtii iyo in wax soo dhaceen ayuu wuxuu mooday tuug darbiga kasoo booday wuu soo baxay meeshii ayuuna yimid mise waaba weershihii meydka ahaa oo meesha qotomo asigoon ogeyn inuu meyd yahay oo tuug u maleeyo ayuu budkii uu watay madaxa uga dhuftay kadibna wuxuu arkay ninkii oo meyd ah wuxuuna u maleeyay asna inuu asiga dilay.
Markaas ayuu isna yiri “laa xowla walaa quwata ilaa billaah, ilaahay ha lacnado alaabtaan yare e aan ninkaan dartiisau dilay markaas ayuu wajigi ninkii sii fiiriyay mise waaba weershe wuxuuna niyada iska dhahay inaad weershe kaliya tahay makugu filnaan weysay markaasaa tuugnimo kusii darsatay Allow na astur.
Kadib asna meydkii ayuu soo qaaday wuxuuna ag keenay nin kirishtaan ah oo tukaanle ah kaasoo tukaankiisa suuqa ku agyaalay meeshii ayuuna qotomiyay sidii qof taagan camal.
Ninkii kirishtaanka ahaa oo khamri iska soo dharjiyay ayaa tukaankii kasoo baxay wuxuuna arkay ninkaan meesha taagan asigoo u qaatay inuu doonayo inuu dhaco waayo horay ayaa dhowr mar loo dhacay wuxuuna ahaa mid ciil daran hayo.
Kadibna inta weershihii kor yimid ayuu feer iyo laad la dhacay waxaase kusoo baxay qaar kamid ah waardiyayaashii suuqa kuwaasoo kirishtaankii ninkii weershaha ahaa ka qabteen hadiiba ay sii fiiriyeen ninka waaba meyd markaas ayay kirishtaankii xireen una geeyeen gurigii waaliga magaalada iyadoo kirishtaankii uu yaabanyahay side feer yar qof dhan ugu dhiman karaa?
Markii waaligii loo keenay ayuu amray in kirishtaankii qoorta laga gooyo, markii la isku soo baxay oo kirirshtaankiina meesha dadka qoorta looga gooyo la saaray isla markaasna kii qoor gooyaha ahaa is diyaariyay qarkana u saaranyahay in qoorta kirushtaankii gooyay ayaa waxaa meesha yimid ninkii muslimka ahaa oo ordaayo kaasoo leh “ha dilin ninkaan waxba ma dilinie ee aniga idil anaa ninkaan dilee”
Markaas ayuu waaligii yaabay oo yiri side ku dhacday? Wuxuu ugu jawaabay in ninkaan uu xalay u soo dhacay isla markaasna uu budkaan madaxa uga dhuftay sidaasna ku dhintay asoo meyd ahna uu kirishtaanka tukaankiisa soo ag istaajiyay marka anigaa ninkaan dilay ee aniga hala I dilo.
Markaas ayuu waaligii amray in Muslimka la dilo, asna markii tiirkii lagu xiray oo qoorta laga goyn rabay ayaa waxaa yimid yahuudkii oo ordaayo misna leh war yaan la dilineey anigaa ninkaan dilay.
Markaas ayaa isna la weydiiyay side ku dhacday?
Wuxuu ku jawaabay aniga ayuu asoo bukaan ah xalay ii yimid hase yeeshee maadaama mugdi meesha aheyd anoon arkeynin ayaan sambabka uga istaagay sidaas ayuuna ku dhintay kadibna miskiinkaan ayaan gurigiisa kusoo tuuray asoo meyd ah marka ninkaan anigaa dilay ee aniga hala I dilo.
Waaligii ayaa markaas amray in muslimka xariga laga furo oo yahuudka lagu xiro lana dilo.
Ayadoo yahuudkii la dili rabo ayaa hadana waxaa yimid harqaanlihii oo ordaayo wuxuuna dhahay anigaa ninkaan dilay wuxuuna ka sheekeeyay sidey wax u dhaceen.
Markaas ayaa hadana harqaanlihii lagu badalay yahuudkii taasoo aad uga careysiisay qoor gooyihii oo sugi la’san qofkii uu qoorta ka goyn lahaa.
Dhanka kale ninka weershaha ah ee meydka ah wuxuu kamid ahaa dadkii suldaanka u shactireyn jiray lkn maalintii uu dhimanaayay ayuu khamri inta cabay qasrigii kazoo tagay habeenkiina wuu soo dhaxay ileen meyd uu ahaayee taasoo kaliftay in suldaanka is weydiiyo waxaana loo sheegay inuu dhintay iyo sidey wax u dhaceen in dilkiisa loo heysto afar nin.
Markaas ayuu suldaankii dhahay waaliga haloo tago hana la ii keeno dhamaan dadka dilkiisa loo heysto.
Kadibna iyadoo ninkii harqaanlaha ahaa tiirka lagu xiray misna qoorta laga goyn rabo ayaa waxaa yimid ninkii suldaanka soo diray oo ordaayo isla markaasna leh suldaanka ayaa dhamaantiina idiin yeeraayo taasoo markale kasii careysiisay qoor gooyihii oo tiirkiisa lagu xiray afar nin walina hal qoor goynin.
Markii ay suldaankii u imaadeen oo sida wax u dhacay uga wada sheekeeyeen ayuu suldaankii la yaabay arkinta iyo sidey macquul ku noqotay in 4 nin hal nin iska daba dilaan iyagoo aanan fahmin.
Markaas ayaa waxaa hadlay hadlay kirishtaankii oo yiri qiso aan hada kahor arkay hadaan kaaga sheekeeyo tan wax lala yaabo ma noqoneyso.
Markaas ayuu suldaankii dhahay oo maxay aheyd qisadaas?
Kirishtaankii ayaana hadalkiisii sidaan ku bilaabay; waxaad ogaataa boqorow aniga inaan kazoo jeedo qibdiyiinta masar ku nool oo aabahey waa reer masar wuxuuna ahaan jiray dalaal hase yeeshee wuu geeriyooday ana markuu dhintay ayaan howshii badalkiisa galay oo meesheedii kasii waday waxaana noqday dalaal kale.
Maalin maalmaha kamid ah anoo suuqa joogo ayaa waxaa suuqa iigu yimid wiil aad u qurux badan wuxuuna watay badeeco taasoo uu igula heshiiyay inaan gado islamarkaasna lacago gunooyin badan igu siin doono.
Badeecadii ayaan maalintii oo dhan gadaayay waxaana soo xareeyney qiimo aad u badan lkn qaar kamid ah badeecadii ayaa soo hartay asigana waxaa la gaaray waqtigii uu laaban lahaa, wuxuu markaas igula balamay in badeecada aan gado asigana uu kun dirham qaato inta soo hartayna aan aniga qaato.
Sidii ayaan yeelay mudo ayuuna maqnaa ilaa markii dambe uu yimid wuxuuna I weydiiyay lacagtii markaas ayaan dhahay waan haayaa, markaas ayuu igu dhahay ii haay waan u soo laabanaa,
Markii ay bil kasoo wareegatay ayuu hadana soo laabtay wuxuuna I weydiiyay kunkii dirham inaan haayo ayaan u sheegay markaas ayuu markale igu yiri waan u soo laabanaa.
Wixii sidaas xaalka ahaadaba dhowr bil markii ay kazoo wareegatay anigana waxaan sameeyay lacagtii ayaan maalgashi ku sameeyay waxaana ka faa’iiday lacag badan markaas ayaan waxaan go’aansaday inaan toogtaan wiilka marti qaado maadaama uu qof fiican yahay sidoo kalana aan lacagtiisa waxbadan ku faa’iiday.
La soco qeybta 25aad.
Waxaa Aqrisay 1,753